စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်စေနိုင်မည့် အဆင့်(၇)ခု – Gentleman Magazine
အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေကို အဆင့်ငယ်လေးတွေအဖြစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပါသလား ???
ဒီအချက်က ရှင်းလင်းလွယ်ကူတာ မဟုတ်ပေမယ့် ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အောင်မြင်မှုကို ရရှိခဲ့သူတိုင်းက တူညီတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာချည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အနေနဲ့လည်း စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ အထမြောက်အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် အခုဖော်ပြမယ့် အဆင့်တွေအတိုင်း ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပြီး အောင်မြင်မှုလမ်းကို လျှောက်လှမ်းလိုက်ပါ။
အဆင့် (၁) – စိတ်ကူးယဉ်ပါ
အရာအားလုံးက စိတ်ကူးထဲ၊ နှလုံးသားထဲမှာ အရင်ဆုံးအစပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ အောင်မြင်မှုတိုင်းဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ထဲကနေ စတင်ခဲ့တာပါ။ သူတို့တွေက စိတ်ကူးယဉ်ကြတယ်။ တကယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်း ယုံကြည်ကြပါတယ်။ အချိန်နည်းနည်းလောက်ယူပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် “တကယ်လို့များ ဘာဖြစ်ရင်”ဆိုတာပြန်မေးကြည့်ပါ။ အကြီးကြီးတွေးပါ။ အဆိုးမြင်စိတ်နဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကြောင့် စိတ်ပျက်အားလျော့မခံပါနဲ့။ သင်ကိုယ်တိုင်၊ သင့်မိသားစုနဲ့ အခြားသူတွေအတွက် ဖြစ်ချင်သမျှ အားလုံးကို စိတ်ကူးယဉ်လိုက်ပါ။
အဆင့် (၂) – ယုံကြည်လိုက်ပါ
ဟုတ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးက အကြီးကြီးဖြစ်နေဖို့ လိုပါတယ်။ သင့်စိတ်ကူးက သင်စွမ်းဆောင်နိုင်တာထက် အများကြီးကျော်လွန်နေတာမျိုး ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ယုံကြည်နိုင်တာမျိုးတော့ ဖြစ်ရပါမယ်။ တချို့အရာတွေ ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ အခြားသူတွေ ကူညီခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ သင်အပြင်းအထန်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ စိတ်ကူးဖြစ်နေပါစေ၊ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တာမျိုး ဖြစ်နေရပါမယ်။ ဥပမာပြောရရင် အဆင့်မြင့်ပညာတွေ မသင်ကြားဖူးတဲ့လူတစ်ယောက်က တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာသန်းငါးဆယ်လောက် လည်ပတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကို တည်ထောင်နိုင်ဖို့ စိတ်ကူးတယ်ဆိုရင် ကြီးမားပေးမယ့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသက်(၉၀)အရွယ် အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါသည် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က တစ်နေ့မှာ သုံးနာရီကြာ မာရသွန်ပြေးပွဲ ၀င်ပြေးဖို့ စိတ်ကူးတယ်ဆိုရင် ကြီးမားပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ချေမရှိပါဘူး။
အဆင့် (၃) – မြင်အောင်ကြည့်ပါ
ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အောင်မြင်မှုကို ရရှိသူတိုင်းမှာ အလေ့အကျင့်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ သူတို့က အောင်မြင်မှုကို မြင်အောင်ကြည့်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဂိုထောင်ရုံးခန်းထဲက ခေါက်ကုလားထိုင်လေးမှာ ထိုင်နေရင်းကပဲ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဒေါ်လာ(၂၅)သန်းတန် ရုံးချုပ်ကြီးရဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ရုံးခန်းထဲမှာ ထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ မြင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို ပုံဖော်ထားကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။
အဆင့် (၄) – ပြောပြပါ
စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေအများစု လက်တွေ့မှာဖြစ်မလာတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုက ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းအတွက်ပဲ သိမ်းထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ဒီစိတ်ကူးက တစ်ယောက်တည်းမက်နေတဲ့ တိုးတိတ်အိပ်မက်တစ်ခုလိုပါပဲ။ တကယ်လို့ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ အမှန်တကယ်ထမြောက်အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် လူတွေကို ပြောပြဖို့ လိုပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ သင့်အိပ်မက်ကို လူတွေကို ပြောပြနေတာနဲ့အမျှ ပိုပြီးတော့ ယုံကြည်မှုရှိလာလေပဲ ဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ ပိုလိုအပ်လာတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေကို ပြောထားပြီးမှ ဖြစ်အောင်မလုပ်ရင် အလှောင်ခံရနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် (၅) – အစီအစဉ်ချပါ
စိတ်ကူးအိပ်မက်တိုင်းကို အစီအစဉ်တစ်ခုရှိနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်စိတ်ကူးအိပ်မက်ကို စိတ်ကူးယဉ်နေရုံ၊ ယုံကြည်နေရုံ၊ မြင်အောင်ကြည့်ရုံ၊ ပြောပြနေရုံနဲ့ တကယ်ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်အနေနဲ့ အချိန်ယူပြီး အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အစီအစဉ်ကို ရေးဆွဲဖို့ လိုပါတယ်။ တတ်နိုင်သမျှအားလုံးကို အသေးစိတ်စဉ်းစားရေးဆွဲပါ။ အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးကို လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အပိုင်းသေးလေးတွေဖြစ်အောင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။ သင့်စိတ်ကူးအစီအစဉ်တစ်ခုချင်းစီကို အပြီးသတ်လုပ်ဆောင်ရမယ့် အချိန်ကာလတစ်ခု သတ်မှတ်ပါ။
အဆင့် (၆) – လုပ်ဆောင်ပါ
တကယ်မလုပ်ရင် ဘယ်အရာမှ တကယ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြောရမှာ စိတ်မကောင်းပေမယ့် စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ အထမြောက်အောင်မြင်သူတွေတိုင်းက အလုပ်ကြိုးစားကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်လောကလုံးက တီဗီရှေ့မှာထိုင်ပြီး အစီအစဉ်တွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကြည့်နေချိန်မှာ အောင်မြင်သူတွေကတော့ သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးတွေ အကောင်အထည်ပေါ်လာဖို့ ရည်မှန်းချက်နဲ့ အလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။ ညီမျှခြင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင် [ရေတိုအလုပ် x အချိန် = ရေရှည်အောင်မြင်မှု] ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်လေးတွေက အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ရေရှည်မှာ ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကို ဖြစ်ထွန်းစေမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။ တစ်နေ့ကို တစ်လံပဲ ရွေ့နိုင်စေဦး။ ရည်မှန်ချက်ပန်းတိုင်ကို နောက်ဆုံးရောက်မှာ သေချာပါတယ်။
အဆင့် (၇) – ခံစားပါ
သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိပြီး စိတ်ကူးအိပ်မက်အတိုင်း နေနိုင်ပြီဆိုရင် သေချာ ခံစားပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ အောင်မြင်မှုဆီသို့ လျှောက်လမ်းတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်း ပျော်ရွှင်ကျေနပ်နေဖို့လိုသလို တစ်ခုအောင်မြင်တိုင်းလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တစ်ခုခု ပြန်ချီးမြှင့်ပါ။ ရည်မှန်းထားတဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီဆိုရင် ဆုအကြီးစားတစ်ခု ပြန်ချီးမြှင့်ပါ။ ကျေးဇူးသိတတ်ပြီး ရက်ရောမှုလည်း ရှိပါစေ။ သင့်အိပ်မက်ကြောင့် အခြားသူတွေ ကောင်းကျိုးရစေဖို့ လုပ်ဆောင်ပါ။
ဒါတွေ အားလုံးပြီးသွားရင် အဆင့်(၁)ကို ပြန်သွားပါ။
ဒီတစ်ခါ ပိုကြီးမားတဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်ကို စိတ်ကူးယဉ်လိုက်ပါ။
စိတျကူးအိပျမကျတှေ ဖွဈမွောကျအောငျမွငျစနေိုငျမညျ့ အဆငျ့(၇)ခု
အောငျမွငျဖွဈထှနျးမှုတှကေို အဆငျ့ငယျလေးတှအေဖွဈ ခှဲခွမျးစိတျဖွာနိုငျပါသလား ???
ဒီအခကျြက ရှငျးလငျးလှယျကူတာ မဟုတျပမေယျ့ ကွီးကယျြခမျးနားတဲ့အောငျမွငျမှုကို ရရှိခဲ့သူတိုငျးက တူညီတဲ့ဖွဈစဉျတှကေို ဖွတျသနျးခဲ့ရတာခညျြးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့အနနေဲ့လညျး စိတျကူးအိပျမကျတှေ အထမွောကျအောငျမွငျခငျြတယျဆိုရငျ အခုဖျောပွမယျ့ အဆငျ့တှအေတိုငျး ကွိုးစားလုပျဆောငျပွီး အောငျမွငျမှုလမျးကို လြှောကျလှမျးလိုကျပါ။
အဆငျ့ (၁) – စိတျကူးယဉျပါ
အရာအားလုံးက စိတျကူးထဲ၊ နှလုံးသားထဲမှာ အရငျဆုံးအစပွုတာဖွဈပါတယျ။ ကွီးကယျြခမျးနားတဲ့ အောငျမွငျမှုတိုငျးဟာ လူတဈယောကျရဲ့ စိတျထဲကနေ စတငျခဲ့တာပါ။ သူတို့တှကေ စိတျကူးယဉျကွတယျ။ တကယျဖွဈလာနိုငျတယျလို့လညျး ယုံကွညျကွပါတယျ။ အခြိနျနညျးနညျးလောကျယူပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ “တကယျလို့မြား ဘာဖွဈရငျ”ဆိုတာပွနျမေးကွညျ့ပါ။ အကွီးကွီးတှေးပါ။ အဆိုးမွငျစိတျနဲ့ အတှေးအချေါတှကွေောငျ့ စိတျပကျြအားလြော့မခံပါနဲ့။ သငျကိုယျတိုငျ၊ သငျ့မိသားစုနဲ့ အခွားသူတှအေတှကျ ဖွဈခငျြသမြှ အားလုံးကို စိတျကူးယဉျလိုကျပါ။
အဆငျ့ (၂) – ယုံကွညျလိုကျပါ
ဟုတျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့စိတျကူးက အကွီးကွီးဖွဈနဖေို့ လိုပါတယျ။ သငျ့စိတျကူးက သငျစှမျးဆောငျနိုငျတာထကျ အမြားကွီးကြျောလှနျနတောမြိုး ဖွဈခငျြဖွဈနမှောပါ။ ဒါပမေယျ့ ယုံကွညျနိုငျတာမြိုးတော့ ဖွဈရပါမယျ။ တခြို့အရာတှေ ဖွဈလာခဲ့မယျဆိုရငျ၊ အခွားသူတှေ ကူညီခဲ့မယျဆိုရငျ၊ သငျအပွငျးအထနျကွိုးစားမယျဆိုရငျ ဘယျလောကျကွီးကယျြခမျးနားတဲ့ စိတျကူးဖွဈနပေါစေ၊ အကောငျအထညျဖျောနိုငျတာမြိုး ဖွဈနရေပါမယျ။ ဥပမာပွောရရငျ အဆငျ့မွငျ့ပညာတှေ မသငျကွားဖူးတဲ့လူတဈယောကျက တဈနှဈကို ဒျေါလာသနျးငါးဆယျလောကျ လညျပတျနတေဲ့လုပျငနျးတဈခုကို တညျထောငျနိုငျဖို့ စိတျကူးတယျဆိုရငျ ကွီးမားပေးမယျ့ ဖွဈနိုငျခရြှေိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အသကျ(၉၀)အရှယျ အဆဈအမွဈရောငျရောဂါသညျ အမြိုးသမီးတဈယောကျက တဈနမှေ့ာ သုံးနာရီကွာ မာရသှနျပွေးပှဲ ၀ငျပွေးဖို့ စိတျကူးတယျဆိုရငျ ကွီးမားပမေယျ့ ဖွဈနိုငျခမြေရှိပါဘူး။
အဆငျ့ (၃) – မွငျအောငျကွညျ့ပါ
ကွီးကယျြခမျးနားတဲ့အောငျမွငျမှုကို ရရှိသူတိုငျးမှာ အလအေ့ကငျြ့တဈခု ရှိပါတယျ။ သူတို့က အောငျမွငျမှုကို မွငျအောငျကွညျ့တတျကွပါတယျ။ သူတို့ဟာ ဂိုထောငျရုံးခနျးထဲက ခေါကျကုလားထိုငျလေးမှာ ထိုငျနရေငျးကပဲ သူတို့ကိုယျသူတို့ ဒျေါလာ(၂၅)သနျးတနျ ရုံးခြုပျကွီးရဲ့ အမှုဆောငျအရာရှိခြုပျရုံးခနျးထဲမှာ ထိုငျပွီးအလုပျလုပျနတေယျလို့ မွငျတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ စိတျကူးအိပျမကျတှကေို ပုံဖျောထားကွညျ့ဖို့ လိုပါတယျ။
အဆငျ့ (၄) – ပွောပွပါ
စိတျကူးအိပျမကျတှအေမြားစု လကျတှမှေ့ာဖွဈမလာတဲ့ အကွောငျးရငျးတဈခုက ကိုယျပိုငျစိတျကူးအိပျမကျတှကေို ကိုယျတဈယောကျတညျးအတှကျပဲ သိမျးထားလို့ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုဆိုရငျ ဒီစိတျကူးက တဈယောကျတညျးမကျနတေဲ့ တိုးတိတျအိပျမကျတဈခုလိုပါပဲ။ တကယျလို့ သငျ့ရဲ့စိတျကူးအိပျမကျတှေ အမှနျတကယျထမွောကျအောငျမွငျခငျြတယျဆိုရငျ လူတှကေို ပွောပွဖို့ လိုပါတယျ။ အကွောငျးရငျးကတော့ သငျ့အိပျမကျကို လူတှကေို ပွောပွနတောနဲ့အမြှ ပိုပွီးတော့ ယုံကွညျမှုရှိလာလပေဲ ဖွဈတာကွောငျ့ပါ။ နောကျထပျအကွောငျးရငျးတဈခုကတော့ ဖွဈအောငျလုပျဖို့ ပိုလိုအပျလာတာကွောငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ လူတှကေို ပွောထားပွီးမှ ဖွဈအောငျမလုပျရငျ အလှောငျခံရနိုငျတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
အဆငျ့ (၅) – အစီအစဉျခပြါ
စိတျကူးအိပျမကျတိုငျးကို အစီအစဉျတဈခုရှိနရေမှာ ဖွဈပါတယျ။ သငျ့စိတျကူးအိပျမကျကို စိတျကူးယဉျနရေုံ၊ ယုံကွညျနရေုံ၊ မွငျအောငျကွညျ့ရုံ၊ ပွောပွနရေုံနဲ့ တကယျဖွဈလာမှာ မဟုတျပါဘူး။ သငျ့အနနေဲ့ အခြိနျယူပွီး အိပျမကျကိုအကောငျအထညျဖျောဖို့ အစီအစဉျကို ရေးဆှဲဖို့ လိုပါတယျ။ တတျနိုငျသမြှအားလုံးကို အသေးစိတျစဉျးစားရေးဆှဲပါ။ အစီအစဉျတဈခုလုံးကို လုပျဆောငျနိုငျတဲ့အပိုငျးသေးလေးတှဖွေဈအောငျ ခှဲခွမျးစိတျဖွာပါ။ သငျ့စိတျကူးအစီအစဉျတဈခုခငျြးစီကို အပွီးသတျလုပျဆောငျရမယျ့ အခြိနျကာလတဈခု သတျမှတျပါ။
အဆငျ့ (၆) – လုပျဆောငျပါ
တကယျမလုပျရငျ ဘယျအရာမှ တကယျဖွဈလာမှာမဟုတျပါဘူး။ ပွောရမှာ စိတျမကောငျးပမေယျ့ စိတျကူးအိပျမကျတှေ အထမွောကျအောငျမွငျသူတှတေိုငျးက အလုပျကွိုးစားကွသူတှဖွေဈပါတယျ။ တဈလောကလုံးက တီဗီရှမှေ့ာထိုငျပွီး အစီအစဉျတှေ၊ ဇာတျလမျးတှဲတှကွေညျ့နခြေိနျမှာ အောငျမွငျသူတှကေတော့ သူတို့ရဲ့စိတျကူးတှေ အကောငျအထညျပျေါလာဖို့ ရညျမှနျးခကျြနဲ့ အလုပျလုပျနကွေပါတယျ။ ညီမြှခွငျးတဈခုအနနေဲ့ဆိုရငျ [ရတေိုအလုပျ x အခြိနျ = ရရှေညျအောငျမွငျမှု] ဖွဈပါတယျ။ အခုလုပျနတေဲ့အလုပျလေးတှကေ အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ ရရှေညျမှာ ကွီးမားတဲ့အောငျမွငျမှုကို ဖွဈထှနျးစမေယျဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။ တဈနကေို့ တဈလံပဲ ရှနေို့ငျစဦေး။ ရညျမှနျခကျြပနျးတိုငျကို နောကျဆုံးရောကျမှာ သခြောပါတယျ။
အဆငျ့ (၇) – ခံစားပါ
သငျ့ရဲ့ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျကို ရောကျရှိပွီး စိတျကူးအိပျမကျအတိုငျး နနေိုငျပွီဆိုရငျ သခြော ခံစားပြျောရှငျနိုငျဖို့လညျး လိုပါတယျ။ အောငျမွငျမှုဆီသို့ လြှောကျလမျးတဲ့လမျးတဈလြှောကျမှာလညျး ပြျောရှငျကနြေပျနဖေို့လိုသလို တဈခုအောငျမွငျတိုငျးလညျး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျတဈခုခု ပွနျခြီးမွှငျ့ပါ။ ရညျမှနျးထားတဲ့ စိတျကူးအိပျမကျကို ပိုငျဆိုငျနိုငျပွီဆိုရငျ ဆုအကွီးစားတဈခု ပွနျခြီးမွှငျ့ပါ။ ကြေးဇူးသိတတျပွီး ရကျရောမှုလညျး ရှိပါစေ။ သငျ့အိပျမကျကွောငျ့ အခွားသူတှေ ကောငျးကြိုးရစဖေို့ လုပျဆောငျပါ။
ဒါတှေ အားလုံးပွီးသှားရငျ အဆငျ့(၁)ကို ပွနျသှားပါ။
ဒီတဈခါ ပိုကွီးမားတဲ့ စိတျကူးအိပျမကျကို စိတျကူးယဉျလိုကျပါ။
Previous: ချစ်တင်းနှောခြင်းမှ ရရှိနိုင်သည့် အကျိုးကျေးဇူး
Next: အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အလေ့အကျင့်(၂၁)ခု